ब्लड प्रेसर जाँच्दा के गर्नु हुँदैन ? - Naya Patrika
ब्लड प्रेसर जाँच्दा के गर्नु हुँदैन ?
डा. ओममूर्ति अनिल मुटुरोग विशेषज्ञ | साउन २७, २०७४
ब्लडप्रेसर जाँच गर्दा बोल्नु हुँदैन ।
कम्तीमा पाँच मिनेटको विश्रामपछि मात्र परीक्षण गर्नुपर्छ ।
हातलाई टेबलमाथि सपोर्ट दिएर राख्नुपर्छ ।
पहिलोपटक दुवै हातमा नाप्नुपर्छ ।
प्रेसर बढी भएको हातमा पुनः जाँच लिनुपर्छ ।
कोठाको वातावरण शान्त र तापक्रम आरामदायी हुनुपर्छ ।
प्रेसर नाप्नुभन्दा कम्तीमा ३० मिनेटअघिदेखि खाना, चिया, सुर्ती खाएको हुनु हुँदैन ।
एउटामाथि अर्को खुट्टा खप्ट्याएर ब्लडप्रेसर जाँच गर्नु हुँदैन ।
लुगाको माथिबाट नाप्नु हुँदैन ।
हिँडडुल वा व्यायाम गर्नेबित्तिकै नाप्नु हुँदैन ।